Mpampianatra Mitokona Ho Fiarovana Ny Teny Katalana Ao Amin’ny Vondro-Nosy Espaniola Baleara · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Hayley Warden
Voadika ny 13 Oktobra 2013 2:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Català
Ilay Hulk tsy mampino manao fihetsiketsehana ho fiarovana ny Fanabeazam-panjakana. Kisarisarin'i Juan Francisco Mota.
Taorian'ny roa herinandro nanaovan'ireo mpampianatra fitokonana tsy voafetra tao amin'ny Vondro-Nosy Baleara ao Espaina, olona maherin'ny 80.000 no nidina an-dalambe mba hitaky ny fanafoanana ny didy hitsivolana hanolo ny fampianarana amin'ny fiteny Katalàna ka ho aminà fitenim-pirenena telo.
Tamin'ny 29 Septambra, nameno ny arabe tao an-drenivohitry ny nosy Balearic hanohitra ny governemantam-paritra, tantanin'i José Ramón Bauzà ( Antokom-bahoaka) ny “onjan'ny maitso” [es], lokon'ny mpisolotena ireo miaro ny fanabeazam-panjakana ka manohitra ny fanafoanana ny tetibola. Araka ny filazan'ny Fikambanan'ny Matematisiana Baleara [ca], , olona maherin'ny 80.000 no nitaky ny fanafoanana ity lalàna vaovao momba ny fampianarana ity tao Palma izay natao tamin'ny alalan'ny tarigetra hoe «Antso ho amin'ny fampianarana mendrika”.
Tohin'ny fitokonan'ny fampianarana tsy voafetra izany izay nanomboka tao amin'ny Nosy Balearic tamin'ny 16 Septambra izy ity, ary maherin'ny80 isan-jato ireo mpampianatra mandray anjara amin'izany [CA], araka ny filazan'i Sendikà. Mametraka fampianarana amin'ny fitenim-pirenena telo (TIL) ity lalàna mampifanditra ity ka manaisotra ny fiteny Katalàna amin'ny teny iraisana any an-tsekoly. Nanambara ny fihetsiketsehana fa aroson'ny governemanta ny fampiasana ny fitenim-pirenena telo ho manda fandemena ny teny ao an-toerana.
Ao anatin'ny vanim-potoana manahirana andalovan'ny sekolim-panjakana, izay tandindonin'ny politikan'ny fitsitsiana sy ny fanafoanana ny tetibola [es] tsy ankitsahatra, ny fanerena hampiasa ny TIL ao amin'ireo nosy izay ny teny ofisialy ny teny katalàna tahaka ny Espaniola ihany koa any Catalonia sy Valencia, no rangory fototry ny afo.
Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, niara-dalana ireo olona avy amin'ny tanàna [ca] maro amin'ny faritra miteny Katalana. Tao amin'ny Twitter, nanjary lohahevitra malaza manerantany ny teny ifankafantarana #VagaIndefinidaDocents [#Fitokonana tsy voafetra ataon'ny mpampianatra].
Ny fomba fijerin'ny governemanta
Manoloana ny fihetsiketsehana ara-tsosialy mieli-patrana indrindra [es] mandritra ny vanim-potoan'ny demokrasia misy ankehitriny ao amin'ny vondro-nosy, manitrikitrika ny governemanta fa tsy mahasolo tena ny maro an'isan'ny fiarahamonina ireo mpitokona sy mpanao fihetsiketsehana [es], ary tsy milefitra amin'ny fanapaha-keviny tsy hanafoana ny lalàna. Fanampin'izany, ahenany ihany koa isan'ny mpanao fihetsiketsehana [CA] (milaza ny sendikà fa 90 isan-jaton'ireo mpampianatra no nandray anjara, nanambara kosa ny manampahefana misahana ny fampianarana fa 20 isan-jato izany). Norahonan'ny governemanta ihany koa ireo mpampianatra mpitokona. Nanambara tao anaty lahatsoratra [es] nivoaka tao amin'ny gazety espaniola El Mundo i Antoni Camps [es], solombavambahoaka ao amin'ny antokom-bahoaka (PP) sady mpikambana ao amin'ny Vaomieran'ny Fampianarana ao amin'ny Antenimiera Baleara fa:
Tsara ho fantatr'ireo mpampianatra izay “mandray anjara” amin'ny fitokonana fa hatramin'izao, TSY ory amin'ny karamany mandritra ny andro hitokonan'izy ireo ry zareo mpanetsiketsika, raha jerena amin'ny fahakamoan'ny sendikalista, saingy ho hafa noho izany amin'ity taona ity. Midika izany fa ny lehilahy sy ny vehivavy izay miasa ao mandritra ny andro fitokonana dia ho tapaka karama, tahaka ireo “mpitokona” ambiny.
Sary nozarain'ireo mpanao fihetsiketsehana izay mampiseho fihetsiketsehana maresaka:
Sary mampitolagaga tamin'ny fihetsiketsehana androany. Maitso ao Palma. Bauzà, izao no maro an'isa tsy miteny!!!
Mifaninana ny amin'izay hita ao an-dalambe ny teny ifankafantarana fanohanana ao amin'ny Twitter tahaka ny #29sTotsSomDocents [#29Sept Mpampianatra Avokoa Izahay rehetra], #Bauzádimissió [Bauzáfametraham-pialàna] ary ny #alesillesencatalà [#ao amin'ny nosy katalana] .
Mametraka fampianarana amin'ny tenim-pirenena telo ny TIL, ka ny ampitoviana mitovy ny Katalàna, Espaniola ary ny Anglisy. Manova ny maodely fisongadinan'ny teny Katalana izay teny nampiasaina tao amin'ireo nosy nandritra ny taonjato telo lasa izany.
Nandritra ny fiampitan'i Espaina mankany amin'ny demokrasia, niroborobo tao amin'ny Nosy Baleara ny famerenenana ny teny Katalana tany an-tsekoly, tahaka ny tao Catalonina sy Valence. Nametraka ny Lalàna Famariparitana ny fiteny [ca] tamin'ny taona 1986 fa ekena sy ampiasaina miandalana ho toy ny teny ifampiresahana amin'ny fampianarana ny teny Katalana antsoina ny governemanta fa hitohy izany.
Nanomboka tamin'ny fahavaratra ny olana. Talen-tsekoly telo tao Mahon [ca], Menorca, no nahantona tamin'ny asany sady tsy nahazo karama tamin'ny volana Jolay satria nandà hampihatra ny maodely TIL. Nisy ny hetsi-panohanana [ca] natao tao amin'ny Change.org, sy tao amin'ny Twitter, izay nahazo hafatra feno firaisankina tamin'ny teny ifankafantarana #TotsSomDirectorsMao [#mpampianatra avokoa izahay rehetra]. Tamin'ny 25 Septambra, nanaiky [ca] handray azy ireo indray ny governemanta, na dia mbola ao anatin'ny voaraoka aza izy ireo. Hatramin'izao, ity no fihetsika tokana mampiseho fihavanana sy dinidinika manoloana ny mpitokona.
Voarain'ny Fitsarana Tampony ny fangataham-pitsarana manohitra ny TIL avy amin'ireo Sendika UGT (Sendikà Jeneralin'ny mpiasa ) sy ny STEI [ca] (Sendikàn'ny Mpiasan'ny Fampianarana ao amin'ny Nosy Baleara) tamin'ny fiandohan'ny volana Septambra. Tamin'ny 6 Septambra, namoaka didy famphatoana vonjimaika ny mpitsara, saingy afaka ora fohy, nankatoavin'ny fahefana mpanatanteraka tamin'ny alalan'ny didim-panjakana tsy nandalo adihevitra tao amin'ny antenimiera ny volavolan-dalàna, ary manan-kery avy hatrany izany.
Hampihena ny tsy fahombiazana an-tsekoly ve ny fanafoanana teti-bola sy ny fampiasana tenim-pirenena telo?
Mihevitra ny governemanta fa hanampy amin'ny fampihenana ny tsy fahombiazana an-tsekoly ny volavolam-pampianarana avy aminy. Maro ireo misalasala amin'izany filazana izany, tahaka an'i Jaume Lladó (@datiljlj), mpampianatra matematika, tonian-dahatsoratra sady mpikatroka, izay nanazava (ca) tamin'ny lahatsoratra fanehoan-kevitra tao amin'ny gazety Katalana Diari de Balears fa:
Mikasika ny teny vahiny, voalaza ihany koa fa afa-mianatra ny taranja any an-tsekoly ny mpianatra rehefa mahatratra ny tokonam-pahatakaran-dresaka. Etsy ankilany, tsy hianatra ilay fiteny intsony ireo mpianatra, ary mihoatra izany, ho kely kokoa nny taranja hianaran'izy ireo.
Raha manana olana amin'ny fahazoana taranja iray amin'ny fiteniny mahazatra azy ny mpianatra, inona no tombotsoa azo amin'ny fampidirana fiteny vahiny vaovao tsy mahamailaka azy ireo ny miteny azy?
Maro ireo fihetsiketseham-piraisankina [ca] teo anivon'ny tontolon'ny fampianarana. Samy naneho ny fanohanana ny fitokonana ireo seha-pampianarana, fikambanana ara-tsosialy sy ara-kolontsaina, sy ireo olo-malaza avy amin'ireo faritra miteny Katalàna sy ao Espaina.
Nikarakara fanangonam-bola ihany koa ireo olom-pirenena ireo mba hanonerana ny karaman'ireo mpampianatra mitokona nahena. Mpanao gazety Joan Canela (@ JoanCanela ), iray amin'ireo mpanao gazety tompon-kevitra tamin'ny tetikasa Mèdia.cat [ca], nisioka hoe:
Maherin'ny 40.000 € [ eo amin'ny 54.000 dolara amerikana eo ] no vola voaangona ho an'ireo mpampianatra mitokona #indefiniteteachersstrike ary hilaza indray izy ireo [governemanta] avy eo fa tsy fotoanan'ny firaisankina izao http://t.co/gtvIdtuJC0 — Joan Canela (@JoanCanela) 19 Septambra, 2013.
Mbola mitohy foana hatramin'izao ny fitokonana mandra-pisian'ny fifampiresahana eo amin'ny governemanta sy ny mpikarakara ny fitokonana.